အခုအချိန်မှာမဲပေးပါ - ဘယ် FUCK ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်ပေးမှာလဲ။ - သတင်း
အခုအချိန်မှာမဲပေးပါ - ဘယ် fuck ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်ပေးမှာလဲ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က fuckboy အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ သငျသညျကိုဖတ်ပေါ်တွင်သင်စွန့်ခွာချင်ပါတယ်သူအမျိုးအစားနှင့်သူနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါသင်သာတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်အမျိုးအစား။ သူဟာတွစ်တာမှာရှိတဲ့အခြားမိန်းကလေးငယ်များကိုတူညီတဲ့ချိုမြိန်သောခံစားချက်များကိုတိုက်ရိုက်စာတိုပေးပို့နေသည်ကိုသင်သတိမထားမိဘဲမှန်ကန်သောအရာများကိုပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုငါတို့ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
သို့သော် 2017 ခုနှစ်တွင် fuckboys နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ fuckboy နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သိသာထင်ရှားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည်သင့်ကိုတိတ်တိတ်လေးဖြင့်နစ်မြှုပ်နှံပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်သင်သည်သင်၏အမှားဟုထင်စေပြီး uni သည်သူတို့၏စမ်းသပ်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
တိုင်းဒီဂရီ fuckboy ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားရှိပါတယ်။ ဤ fuckboy များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး Uni နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ အန္တရာယ်များလာသည်။ သို့သော်မည်သည့်သင်တန်းကအဆိုးဆုံး fuckboy များလဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း
သူသည် North Face အဝတ်အစားများပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင် Urban Outfitters တွင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသူကလက်တွေ့ကျတဲ့သိုးနှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့အပူ၌တည်ရှိ၏။ သူကလက်တွေ့ကျတဲ့နည်း nerdy နှင့်အနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပါပဲ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ စာသားအတိုင်းအတာသည်သင်ထက်အသက် ၆၅ သန်းပိုကြီးသောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်သည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူကမန်ချက်စတာအလယ်မှာရှိတဲ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုဖြတ်ပြီးလာမယ့်အခွင့်အလမ်းမှာသူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေ၊ ခဲတံတွေ၊ သွေးချွန်စက်နဲ့စုတ်တံတွေအတွက်အိတ်ကပ်တွေအများကြီးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဘောင်းဘီတွေ ၀ တ်ထားလိမ့်မယ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဂရိကိုအားလပ်ရက်သွားတော့မှာလား။
သူတို့သည်သင့်အားကျေးလက်ဒေသတွင်လှပသောအိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်ရန်သူတို့၏အိပ်မက်အကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်အခြားတိုင်းပြည်များ၌စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်အိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းတွင်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများမည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုသူတို့ပြောလိမ့်မည်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့က 9-5 နေနှင့်အမှန်တကယ်သာအနည်းဆုံး 27 သည်အထိတစ်ခုတည်း, အပူအပင်ကင်းမဲ့ဘဝမျှော်မှန်းနေသောကြောင့်သူထွက်ခွာတစ်ဝက်သည်သူ၏သင်တန်း shagged ရဲ့ထွက်လှည့်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ပုံမှန်အားဖြင့်အိတ်ကလေးများဝတ်ဆင်သောဒီဇိုင်နာဝတ်ဆင်သူများမှာသူတို့၏ကြွယ်ဝသောမိဘများကဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်အလွန်စျေးကြီးသောဖိနပ်များရရှိကြသည်။ ဆံပင်သူတို့ဂရုမစိုက်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲစုံလင်သောအံသွားရှိပါတယ်ပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပျင်းရိသည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဝမ်းနည်းပါတယ်, တနေ့လုံးစတူဒီယို၌ဖြစ်။ ကျော်လာချင်?
သူတို့သည်နွေးထွေးသောအရက်ဆိုင်တွင်အနီရောင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ဖြင့်လိမ္မာပါးနပ်သောစကားပြောဆိုမှုဖြင့်သင့်ကိုသွေးဆောင်လိမ့်မည်။ ပုလင်းသုံးချောင်းအကြာတွင်သင့်အားလိပ်ပြာကြည့်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရရှိပြီးသူ၏နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံပရောဂျက်တွင်သူအားသဘောတူရန်သဘောတူလိုက်သည်။ ဒီအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံခြင်းမပြုမီ, သူက (သူ့ insta အားဖြင့်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း - ဤသူသည် snapchat အဘို့အလွန်းရှုပ်ထွေးနေသည်) နှင့်သူသည်ကြီးမားသော bender အပေါ်သွားပြီနှင့်သင်ပြန်စာပို့ဘူး။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သငျသညျသိသာ, တစ္ဆေရလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း တစ်ခုချင်းစီကိုအဝတ်အစား ensemble အနည်းဆုံး corduroy, flannel နှင့်ချည်အဝတ်အထည်ပါရှိပါတယ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ယနေ့အချို့သောအသစ်သောဗီနိုင်းတွေရတယ်, ရဲ့သတ္တုတွင်းမှာယိုကြကုန်အံ့။
သငျသညျမိမိအလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်မွကွေီး Vibe နေဖြင့်ဆွဲငင်, သင်မူကားတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ များစွာသောအခြားမိန်းကလေးများလှည့်ပတ်တွားသွားနေကြသည်နှင့်သူသည်နိမ့်သော့ချက်ကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှစ်သက်တယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့ကိုသင်တိုက်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ညစာစားပြီးနောက်တွင်သင်သည်ပတ်ပတ်လည်နေပြီးဖြစ်ပျက်တော့မည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ နောက်သူသိချင်တာကသူဟာနောက်မိန်းကလေးအတွက် fajitas လုပ်နေတယ်ဆိုတာမေ့သွားလို့ပဲ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး ထက်ပိုတိတ်တဆိတ်ချိန်းတွေ့သည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဒီညလူ့ခန္ဓာဗေဒအကြောင်းလေ့လာချင်သလား။
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု / စာရင်းကိုင်
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ ကျနော်တို့ပြောနေတာပဲသူကဘာမှမှကျူးလွန်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်အပြည့်အဝကောင်းစွာသိ။ သင်လပေါင်းများစွာသူနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူဟာသင့်ရဲ့အမေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ယူဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပုံရသည်။ သူကကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားတယ်၊ အရပ်ရှည်တယ်၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ရှိတယ်။ အမြဲတမ်းဝတ်စုံတစ်ဝိုက်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် သင်တက်လား (အခြားမိန်းကလေး ၁၀ ဦး ကိုပို့သည်)
ပထမဆုံးရက်စွဲပြီးနောက်သင်၌သူတို့နှင့်သင်၌ရှိသည့်အမှန်တကယ်ဓာတုဗေဒနည်းပါးမှုကိုသင်သတိပြုမိပေလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတည်ငြိမ်သူတစ် ဦး နှင့်တစ်ချိန်ကရှိနေခြင်းအတွက်သင်ပျော်ရွှင်နေသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သူတို့ကသာမန်ဘွဲ့တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ပုံမှန်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမင်းရဲ့နျူကလီးယားမိသားစုကိုမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်အတွက်အရမ်းကြီးလွန်းလာပြီနှင့်ခွင့်ပြုဘို့သင့်ကိုယူပါလိမ့်မယ်သူသည်မိမိစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံအလုပ်သင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆက်လက်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူကပုံမှန်, ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ bloke င်အဖြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခဲယဉ်းသည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ငါဒီအလုပ်ပြီးတာနဲ့ငါပတ်ပတ်လည်လာနိုင်သလား?
သမိုင်း fuckboy ထက် ပို၍ ဟန်ဆောင်ကာဂန္ထဝင် fuckboy သည် ပို၍ ဥာဏ်ရည်ရှိပြီးအသုံးချတတ်သည်။ သူကသိသိသာသာများနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုင်, ဂရိအဖြစ်ဆိုးနဲ့တူသင်၏ဆက်ဆံရေးထွက်ကစားပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့၏ဘွဲ့တစ်ခုလုံးသည်အမျိုးသားများ၊ အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်အတူခမ်းနားထည်ဝါစွာလေ့လာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအားသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သူတို့၏မိခင်များကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းအကြောင်းအိပ်မက်ဆိုးများကိုလေ့လာခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ သင့်ရဲ့အမေနဲ့အတူသွားမယ့်အစားသူတို့ဟာ SU မှာရှိတဲ့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူလည်ပင်းညှစ်နေကြလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူ Reiss ကနေ Cashmere လိပ်လည်ပင်းဝတ်ဆင်နှင့် Pret ထံမှအုန်းဖြူပြားချပ်ချပ်အဖြူသယ်ဆောင်လိမ့်မယ်။
သူကကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာကိုပြုလုပ်တာဟာသင့်ကိုမှားယွင်းတဲ့လုံခြုံမှုရှိစေတယ်။ သူကသငျသညျ uni တစ်လျှောက်လုံးအားဖြင့်အကြောင်းကို messed ရတဲ့ခဲ့သည့် LADs မကြိုက်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မများတဲ့သူတစ်ယောက်ကမင်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်မလဲ။ အဖြစ်မှန်၌သူဖြစ်ကောင်းသူအသက် 14 နှစ်ကတည်းကသူနှင့်အတူရှိခဲ့ပေမယ့်နေဆဲသင်တို့နှစ် ဦး စလုံးတစ်လျှောက်တွင်ကြိုးမှစီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး အကွာအဝေးရည်းစားရှိပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူဟာသူ့လမ်းပေါ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်သွားပြီးသင်နဲ့ကောင်မလေးဟောင်းကိုမေ့သွားမှာပါ။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း Primark Star Wars တီရှပ်၊ ခြေထောက်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောဂျင်းဘောင်းဘီ၊ သူတို့ခါးပတ်ချိတ်ထားသောကြိုးနှင့်ပိုက်ဆံအိတ် ၁၀ နှစ်မှစ၍ သူတို့ကြံ့ခိုင်သောကျောပိုးအိတ်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဒါကငါအရမ်းအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်တယ်ရယ်စရာပါပဲ ... haha ​​သင်တစ်ခုခုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပေမယ့်တကယ်ကိုပြန်မသွားချင်ဘူးလား
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့နှင့်ဆင်တူသည့်လစာနှုန်းထားရှိသူတစ် ဦး အတွက်သူတို့သည်သင့်ကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်၏လူ့ဘွဲ့သည်၎င်းကိုဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း Russell & Bromley မှပန်းရောင် Ralphie၊ cream chinos၊ စျေးကြီးသောခြေအိတ်များမှအညိုရောင် brogues ။ လူတွေနဲ့နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုတာကဒီလူတွေဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနေ့ ၂၄/၇ ကိုသွားတော့မယ့်ပုံပဲ
ဒရာမာယောက်ျားလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဇုန်ထဲမှဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူး၊ သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကအရမ်းချစ်ခင်ပြီးအသည်းအသန်ထင်ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်မယ့်သူမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ ပြီးခဲ့သည့်ညကသူတို့ကအခြားသူတစ် ဦး အားပြဇာတ်ရုံတစ်ခုတွင်သူတို့တင်လိုက်သည်ဟုသင်ပြောမည့်အစားသင့်ကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုပါတော့မည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် လိုင်းအချို့ကို run ရန်သင်ကူညီနိုင်မလား။
စိတ်အေးအေးထားသည့်ဘောဂဗေဒပညာရှင် fuckboy သည်အမြဲတမ်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားရှိလိမ့်မည်။ သူဟာပိုက်ဆံအကြောင်းပြောပြီးညစာတောင် ၀ ယ်နိုင်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီညသူနဲ့အတူအိမ်ပြန်မလာရင်သူနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ Bootycall ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူ၌သူကစားနေသောအခြားမိန်းကလေးတစ်သန်းရှိသည်။ သင်သူအကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ပါ။ သူ၏ The Economist သို့လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းသည်သူသည်သင့်တော်သောနေ့ရက်များတွင်မင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သင်တစ် ဦး တရုတ်နှင့်အေးဆေးကပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် - နှင့်အခြားမိန်းကလေးများပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူကသင်၏နုသောနှလုံးသားကိုချိုးဖဲ့လိမ့်မည်ဟုသင်သိသော်လည်းသင်သူ့ကိုအလိုရှိစေသည့် smirk ဖြင့်အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားသည်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဒါကြောင့်သင်အဆင်ပြေယနေ့ညကျော်လာမယ့်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Awww၊ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်! သူတော်စင်၏စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာကိုနှစ်သက်သောသူအားသင်မည်သို့ခုခံတွန်းလှန်နိုင်မည်နည်း။ မှား - ဘယ်သူမှ Pritt Sticks နဲ့ pipe cleaners ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူကသူနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံကျောင်းမှာသင်ဖို့သင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကနှစ်လအကြာမှာသူဟာတစ်သက်တာအခွင့်အလမ်းအတွက်တစ်ချိန်ကဂျပန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ခြေရာခံဂျာကင်အင်္ကျီ (သူဘောလုံးသင်ကြားနေသည့်အချိန်အတွက်)၊ အပေါ်ဆုံးခလုတ်များပါသည့်လူရွှင်တော်တိုတိုအင်္ကျီလက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အလွန်ရှုပ်ထွေးသော bootcut ဂျင်းဘောင်းဘီ။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ငါဒီမှာအမှတ်အသားလုပ်ဖို့သင်္ချာစာတမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
သင့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ Romance မှစာပေ module မှသူတို့လေ့လာခဲ့ရာကိုသုံးပါ။ သူသည်သင့်အားဂစ်တာဖြင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောလိမ့်မည် (ဖြစ်ကောင်း Wonderwall၊ ဘာကြောင့်သူကအခြားဘာမှမသင်ယူရန်လိုသနည်း?) နှင့်သင်၏စာအုပ်ထဲမှအချစ်ဇာတ်လမ်းများ၌ကျနေသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအနည်းငယ်သာရေးပါလိမ့်မည်။ Ergh ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ ဒါဟာအကြောင်းကိုနှစ်ပတ်ကြာကြာပြီးတော့သူ Rochester ရုံ '' ဤမျှလောက်အားဖြင့်ပြုသောအမှု '' ခဲ့ပုံကိုပေါ်သွားစတင်သည်နှင့်သင်အမှန်တကယ်သူတစ် ဦး douche နားလည်သဘောပေါက်။ သူဟာဂန္ထဝင် ၀ တ္ထုများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များမှသူသိသမျှအရာအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုသင်ယူခဲ့သည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူတို့ကစာကြည့်တိုက်ကိုဖြတ်ပြီးမင်းကိုငေးကြည့်နေလိမ့်မယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာသာသူတို့စာအုပ်ထိပ်မှာမင်းနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံမိမှာပါ။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် The Great Gatsby ၏ရုပ်ရှင် version သည် Netflix တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ငါကစာအုပ်ကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူးကြားသိပေမယ့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစောင့်ကြည့်ဖို့ကျော်လာမယ့်စိတ်ကူးလား?
အသိဉာဏ်ရှိပြီးကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်လာသည် - မင်းမိဘတွေကိုအိမ်ပြန်ချင်တဲ့ကောင်လေး။ သူထွက်အလုပ်လုပ်မှာသူကောင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကမင်းကိုဘယ်လိုပျော်ရွှင်စေမလဲညီမျှခြင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သူကသာအောင်မြင်မှုရဖို့တကယ်ပဲလိုချင်တယ်၊
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ကြောက်မက်ဘွယ်ဖက်ရှင်အသိ။ ထိပ်အထိတက်လာတဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှပ်အင်္ကျီကိုကြည့်ပြီးဂျင်းဘောင်းဘီအချပ်များနှင့် shit နှင့်တူသောသင်တန်းဆရာများ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူတွေရဲ့ဆံပင်ကပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ရှက်တတ်ပေမယ့်ချိုမြိန်တဲ့အပြုံးရှိပြီးမင်းသမီးတွေကိုအရူးလုပ်မထားပါနဲ့။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ကျွန်တော့်ရဲ့မနက် ၉ နာရီမတိုင်မီမှာပြင်ဆင်ရန်ပြီး၊
သူသည်သင်၏လူသိရှင်ကြားပုံရိပ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးသင့်အတွက်ဂရုစိုက်နိုင်သည့်အရာထက်ပိုပြီး Vibe ရှိသည်။ ပြားချပ်ချပ်လူဖြူများနှင့် Beyonce လိုပါသလား? သငျသညျသူ့အဘို့လည်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပါပဲ - သူက Techno ညဥ့်အခါနေစဉ် Kardashians မုန်းသူ Central စိန့် Martins မှာအနုပညာလေ့လာနေသူတစ် ဦး ဦး နှင့်အတူအလျင်အမြန် swan ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ နေမကောင်းဆရာများကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပြီး Insta နောက်လိုက် ၁၀၀၀ ကျော်သောစိတ်မကောင်းဖြစ်သူကိုရှာပါ။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူ့အတွက်အရာရာတိုင်းဟာရှည်လျားလွန်းလှသည်။ ရှပ်အင်္ကျီများ၊ အင်္ကျီများ၊ ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်သူ၏ခြေထောက်များကိုနှိုင်းယှဉ်။ နုပျိုသောပုံစံဖြစ်သည်။ လုံးဝနွေးထွေးမှုမရှိသောတစ်ဝက် beanies နှင့်နားတစ်ချောင်းတွင်ပါးလွှာသောကွင်းကွင်းအချိတ်တစ်ခုရှိသည်။ အမြဲတမ်းချဉ်းကပ်လို့မရတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးဝမ်းနည်းပါတယ်။
မနက် ၂ နာရီမှာသူစာပို့မယ်။ ဖျားနာသူတစ် ဦး အကြောင်းသင်ပြောပြပြီး 'ဒါကိုငါတို့သွားသင့်တယ်။ '
သူကတစ်သိုးမွေးထဲမှာကောင်းတဲ့ပုံမှန် bloke နှင့် shit မဟုတ်သောသင်တန်းဆရာတစ် ဦး ပါပဲ။ သူကတစ် ဦး ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ကျေးလက်, စန်းကျင်လှည့်ပတ်ပညာရေးဆိုင်ရာလမ်းလျှောက်၏ဂတိနှင့်အတူ၌သင် reels တခါသူတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူပယ် fucked ရဲ့။ သငျသညျသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သူ၏မြို့ရိုးပေါ်မှာရှိသမျှသောမြေပုံ၏သူသည်ပညာတတ်ရဲ့စဉ်းစားရန်လှည့်စားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သူကသူတို့ကျန်ကြွင်းသောအရာကဲ့သို့ပျင်းစရာလူကလေးကစားရုံ Fifa ပါပဲ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ ကြောင်းသမျှသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးအခါဆက်ဆံရေး၏အလားအလာနှင့်အတူသင်ဆွဲဆောင်။ ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သည့်မြောက်ပိုင်းအလင်းများကိုမြင်ရန်သင့်အားအချစ်ဆုံးတနင်္ဂနွေတစ်ခုကတိပေးလိမ့်မည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သိုး / အရည်အသွေးကောင်းအင်္ကျီနှင့်ပျမ်းမျှပေမယ့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောသင်တန်းဆရာအတွက်။ မုတ်ဆိတ်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် Blue Planet 2?
ပထမတော့သူကစုံလင်တယ်လို့သင်ထင်လိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှု, ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီးအတော်လေးရှုပ်ထွေး။ အဘယ်အရာဖြစ်နိုင်သည်မှားသွားနိုင်မည်နည်း ငရဲ၊ ခင်ဗျားသူ့ကိုဂျယ်ရမီ Corbyn ကြိုက်နှစ်သက်သလိုဟန်ဆောင်ပြီး NHS စုဝေးပွဲအားလုံးကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါမူကားအလွန်ရုတ်တရက်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုတောင်သင်နားမလည်နိုင်တော့ပါ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့သည်အသက်ရှင်ရန်အသိဉာဏ်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟုထင်သောကြောင့်သူတို့သည်သင့်အတွက်သိပ်ကောင်းလွန်းသည်ဟုသူတို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးတာကသူတို့လေ့လာမှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ဟာဂိမ်းကစားကြမှာဖြစ်ပြီး Bumble နဲ့ Tinder ကိုရှေ့မှောက်မှာကစားကြမှာပါ။ သူတို့ဟာတပ်မက်တာပါပဲလို့အခိုင်အမာဆိုကြပါတယ်။ မင်းတို့ဟာလာမယ့်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးမတိုင်မီအထိဖျော်ဖြေဖို့ပျော်စရာကစားနည်းလေးပါပဲ။ ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာပေါ်ရှိသူတို့လိုချင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ။ yeah, သမိုင်းယောက်ျားတွေတစ် ဦး စိတ်ကို fuck ဆိုတဲ့များမှာ, ဒါပေမယ့်သင်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြန်သွားရပ်တန့်မထားဘူး
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ညဥ့်နက်တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ချင်ပါသလား
သူကသူ၏ပြန်ချထားသေးယုံကြည်မှုချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူသငျသညျဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူအမြဲ (သူပြီးနောက်တစ်ပါတ်နှစ်ရက်ကဲ့သို့ uni ၌တည်ရှိ၏) တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒေသတွင်းရှိအအေးခံပိုင့်များကတကယ့်ကို kinky sex ကိုလှည့်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူဤသင်တန်းကိုပြုလုပ်နေကြောင်းသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ ယောက်ျားလေး - မိန်းကလေးအချိုးသည်သတင်းစာပညာ၏ ၁း၃၀ နှင့်တူ၏။ သူသည်လူမှုရေးသင်တန်းများတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ဂျာနယ်လစ်ယောက်ျားလေးများသည်အရာနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုးနှက်ခံရတဲ့ချိန်ခွင်လျှာညှိစက်အသစ်တွေနဲ့ထရပ်ကားတစ်စီးကဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်၊ သူတို့ဟာညညအိမ်ထဲမှာသွားပြီးကေ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလုပ်နေတာကိုကြိုက်ကြတာပါ အိမ်ည။
သူတို့ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေလိုထင်ရပေမည်၊ သူတို့ကအင်္ကျီအိတ်ထဲကကထိကများနှင့်လမ်းလျှောက်ရင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ 'journalo lads' လို့ခေါ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဗဟုသုတကိုလှည့်စားမခံကြဘူး၊ ကျော်လွန်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဟေးရုံဤဆောင်းပါးကိုမြင်လျှင်သင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်ထင်ခဲ့တယ်။
အများကြီးသမိုင်းယောက်ျားလေးများကဲ့သို့ Law ယောက်ျားလေးများတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ AAA ဝင်ရခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, သူတို့သည် uni မှာအရှိဆုံးနှစ်လိုဖွယ်ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်လာကြပြီ, ထိုသို့အများဆုံး subsubscribed သင်တန်းပါပဲ။ ငါတို့ကကလေးရပြီ၊
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့သည်ပုလဲနားကပ်များ၊ frumpy jumpers များနှင့်တစ်ပတ်လျှင်အနီရောင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်သာသောက်သောပိုစတာ၊ ရှေ့နေပုံစံအတွက်သင့်ကိုမလွှဲမရှောင်သာဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ Legally Blonde ရှိ Vivian Kensington ကိုကြည့်ပါ။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း တိုတောင်းတာပဝါ၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုကျော်ကျား၊ စမတ်ကျပန်းဖိနပ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာလုပ်ခဲ့တာက ၁၉၉၈ လူ့အခွင့်အရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ကိုဆန့်ကျင်တယ်။
သင့်ကိုတစ်နေ့တာအချိန်ပေးဖို့ယောက်ျားလေးများနှင့်ဖီဖာကစားခြင်းသည်အလုပ်များလွန်းသည်။ သူကသေချာဘို့ ဦး ခေါင်းတွန်းပါပဲ။ သငျသညျ Tinder အပေါ်သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပေမယ့်သူကပဲသင်နှင့်အတူညဥ့်သုံးစွဲမယ့်တောင်မှဝေး swiping နေဆဲသူလည်း Bumble နှင့် Happn အပေါ်ပါပဲ။ သင်သူ့ကိုသောက်ဖို့ပြောပေမယ့်သူကသူ့စတိုင်မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချိန်ကုန်ချိန်တွင်ဆက်ဆံရေးအတွက်အလားအလာရှိနိုင်ကြောင်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူကဖတ်စာအုပ်ဖတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ။ တစ်ခုသာလိုချင်တယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူကဒီဂျပိန် tracksuit ခွံ, ရှည်လျားတီရှပ်နှင့်အနီရောင် huaraches ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် သူများသည်ဝတ်လစ်စလစ်, ငါအစစ်အမှန်အဘို့အကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပတ်ပတ်လည်လာမလောက်ဘူး။
သူသည် Tinder တွင်မည်သည့်ပွဲတွင်မဆိုဘယ်တော့မှမကစားသောကြောင့်အလောင်းထားခြင်းခံရရန်ကန ဦး အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သင်သည်သူ့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုနည်းနည်းပေးပြီးသည်နှင့်သူသည် fuckboy ဘဝနှင့်ကိုက်ညီရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာသူတို့စာတိုပေးပို့နေတဲ့မိန်းကလေးအရေအတွက်ကိုအမှန်တကယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်လို့လည်းစဉ်းစားမိပါတယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့ဒီဂရီတကယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ၊ ညီမျှခြင်းတစ်ခုစာရွက်အတွက်သင့်ကိုသူတို့စမ်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ၁၇ လက်မ Dell, ထူထပ်သောအနားကွပ်မျက်မှန်များနှင့်ရေတပ်သိုးမွှေးထိုးသိုးမွှေးနောက်ကွယ်တွင် - Narnia မှရှေးအကျဆုံးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ငါ့ကို + u = မင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုနုတ်လိုက်။
သူကမင်းမိဘတွေကိုအိမ်ကိုခေါ်လာမယ်လို့မင်းထင်ခဲ့တဲ့ fuckboy ပေါ့။ ဤသည်ကောင်လေး, ဆေးဝါးသူသည်မထိုက်မတန်င်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးရပ်ဂ်ဘီအဖွဲ့သည်ပါပဲ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သင်သည်သင်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားစဉ်းစားမစတင်မှီဒါပေမယ့်သူတို့ကဘာပဲဆိုလိုတာက, သူတို့ရဲ့ဆေးဝါးမိသားစုထဲမှာတစ်စုံတစ် ဦး အဘို့သင့်အား swiced ပါတယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း Ralphie ရှပ်အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်ကောင်း၊ ကောင်းသောအတိုင်းအတာအဘို့မိမိလည်ပင်းပတ်ပတ်လည် stethoscope ရပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ယုံကြည်မှုရှိပြီး SU တွင်သင်နှင့်သင့်အားသောက်စရာ ၀ ယ်ရန်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးမှာအလွန် chivalrous ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်သကဲ့သို့ပုံရသည်အတိုင်း
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ်9မှာဆေးခန်းရှိပေမယ့်အိပ်လို့မရပါဘူး။ ငါ့ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုထားခဲ့ပါလား X
ခေတ်သစ်ဘာသာစကားများသည် fuck ဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးများအတွက်အိပ်ရာပူဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံးမပြောရင်၊ သူတို့တိုင်းတစ်ပါးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ပြင်သစ်မိန်းကလေးအားလုံးကိုသူတို့ဘာပြောနေမှန်းသင်မသိဘူး။ သူတို့ပင်ပန်းနေလို့အိပ်ရာဝင်ပြီလို့ပြောပြီးတဲ့အခါသူတို့မတော်တဆစာပို့တဲ့အခါတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ်။ သူတို့ကချောချောမွေ့မွေ့စကားပြောတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အိပ်ယာထဲမှာပြင်သစ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသူတို့ပြောဆိုနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဘာသာစကားတိုင်းကိုချက်ချင်းပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ သူတို့ကအရမ်းထူးခြားဆန်းပြားနေနှင့်အခြားယောက်ျားလေးများနှင့်မတူဘဲ။ သူက uni မှာမျိုးစုံမိန်းကလေးများရှိသည်သာမက, သူလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ fuck ဆိုတဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သင်ကသူအမှန်တကယ်အဆိုးဆုံးရဲ့နားလည်သဘောပေါက်
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနှင့်အတူသင်တို့အပေါ်မှာလှည့်စား
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း rollies ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ Burberry ကြည့်ရှုသည့်တုတ်ကျင်း၊ Ray Ban Wayfarers (မိုးရွာနေလျှင်ပင်) All All Saints ဖိနပ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဒီညငါနဲ့အတူအိပ်ချင်ပါသလား?
ဆေးဆိုင်ယောက်ျားလေးများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ကြိုးစား။ အလုပ်ကြိုးစားသူရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်ကိုသူမနှစ်သက်သောကြောင့် PHARMY-ARMYYY! သူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြောက်အပြောက်ပုံနှိပ်အဝတ်အစားတွေနဲ့ SU dancefloor ပေါ်ကစစ်သည်တော်ဆေးသုတ်ပုံမှာပူနေတယ်လို့သင်ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားလည်လိုက်ပြီးလူနဲ့သူတို့ရဲ့ခွေးတွေကိုပြန်ပြီးအားဖြည့်ပေးလိုက်တာပါ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့သည် NHS သို့အလွန်အကျွံဈေးကြီးသောမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းသည့်အလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုသာမကအခြားလူတိုင်းကိုပါသင့်ကို fucking လုပ်နေသည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ခန်းမပတ်ပတ်လည်ဆေးဆိုင် - စစ်တပ်အော်ဟစ်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် NHS ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ခြင်းဟာတကယ်တော့စိတ်ကူးမကောင်းပါဘူး။
သူ့ကိုကြည့်ရတာသူထိုင်နေတာကိုသူကြည့်နေတုန်း၊ မေးခွန်းတွေကြီးကြီးမားမားကိုဆွေးနွေးမယ်၊ သူ့ကိုသင်အထင်ကြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါ interjecting လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နစ်ရှေးကိုသူတက်လာတဲ့အခါတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့စောင့်နေတယ်။ သငျသညျအေးမြသောကြည့်ရှုရန်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်လိုဟန်ဆောင်နေပေမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသိပ်မရှူပါဘူးဒါကြောင့်သင်အရမ်းကျောက်ခဲနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရှက်မရကြဘူး။ သူသည်သင်တို့ကိုဟာသပြုလိမ့်မည်။ သူနှင့်သင်လုံးဝချစ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာပိုကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သငျသညျသူ၏စိတ်ကိုအဘို့အကျလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်ကသူ့အဘို့ကြီးမားသောရုပ်ပုံဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်အဝတ်အစားများနှင့်လက်၌ spliff ။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မင်းထင်သလဲ
သငျသညျသူ့အဘို့လုံလောက်သောစမတ်မဟုတ်ပါဘူး, သူသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကြောင်းသိသေချာအောင်ပါလိမ့်မယ်။ လူပျို နေ့ သင်ကသူ၏ဉာဏ်ရည်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုမှကြည့်ရတာအရမ်းပူလွန်းလို့သူပြောတဲ့အခါသူတောင်မှသူ့ကိုတောင်ယုံနိုင်မှာပါ။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူကတိုင်းအဓိပ္ပာယ်၌သင်တို့၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း uni ဟော်ကီအသင်းဂျက်ဂါသမားများ၊ Hollister တီရှပ်နှင့်အဖြူရောင်စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်း။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ငါတကယ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမယ့်ငါလာတာနောက်မှတွေ့မယ်။
သူလိုချင်တာကိုသူသိတယ်။ သူလည်းသင်လိုချင်တာကိုသိတယ်၊ သူဟာသင်ရနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုသင်ရနေပြီလို့သင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့ဟာပါလီမန်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့မင်းနဲ့အတူလန်ဒန်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့မင်းကတိပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရေးအတွက်သိပ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာ ဦး ထုပ်တစ်စက်နဲ့အိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ရာနှင့်ချီသောဖြစ်ရပ်များကိုစိတ် ၀ င်စားပြီး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကျမ်းစာမှတ်တမ်းများကိုနှစ်သက်ပြီးနောက်သင်၏အချိန်ကာလကိုအမြဲတမ်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဖြစ်ကောင်းမထင်မှတ်ဂရပ်ဖစ် Tee အချို့ကိုမျိုးကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် သင်ထို့နောက်ပတ်ပတ်လည်လာမယ့်သို့မဟုတ်ဘာလဲ
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ မိမိအသင်တန်းအပေါ်မိန်းကလေးများသူအားလုံးသူတို့ကို shagging ရဲ့တကယ်မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြသည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ဟေး, အခြားနေ့ကစိတ်မကောင်း! ပါတီမှာအဲဒီမိန်းကလေးနှင့်အတူရရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး, ငါပဲတကယ်သင့်ကိုပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်နှင့်အထီးကျန်ခံစားခဲ့ကြသည်။ ကျော်လာမလားစိတ်ကူး?
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူသည်သင့်ကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေပြီးသူ၏စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းမှုအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏စိုးရိမ်စိတ်ပမာဏကိုအရေအတွက်အားဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်သည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူဟာ Glastonbury သို့မဟုတ် Boomtown မှာလူတွေကိုမြင်တဲ့သူလိုမျိုး crusty hoodie ဝတ်ထားမယ်။ ဒီအညိုရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Timberlands တို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ သူကပေါင်းပင်၏ပုပ်စပ်သောအနံ့ပါလိမ့်မယ်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ကဲ့သို့အခြေခံကျကျတစ်ခုခု: u up?
အားကစားသိပ္ပံ / ရူပကုထုံး
အမြဲတမ်းချစ်ဘွယ်ကောင်းသောလူဆိုးလူရွှင်တော်, သင်သည်သူတို့ကို fuck ဆိုတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝမျှော်လင့်နေတဲ့အားကစားသိပ္ပံလူကလေးနှင့်အတူအရာသို့ရလိမ့်မယ်။ သာလျှင်သူတို့သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်သွားလာရန်လွယ်ကူသောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်၎င်းတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်လာသည်
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူတို့ကမင်းကိုတကယ်အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကမင်းမျှော်လင့်ထားတာအတိုင်းအတိအကျဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း တစ်ညထွက်ချင်းစီများနှင့်ရှပ်အင်္ကျီ။ တကယ်ပဲ fuck ဆိုတဲ့မထိုက်မတန်။ မှေးမှိန်
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် ငါကယ့်ကိုအနှိပ်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းကျပ်စွာမိပါတယ်, ရပ်ဂ်ဘီလေ့ကျင့်ရေးယနေ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ, သင်ကျော်လာမယ့်နှင့်ငါ့ကိုထွက် sorting? ? xx
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူက Machu Picchu ရဲ့ထိပ်မှာ Epiphany ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ သူကယဇ်ပုရောဟိတ်အဖွဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်မင်းကသူ့ကိုငါတကယ်ချစ်လို့သင်သိပေမယ့်မင်းကငါပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီဆိုတာမင်းသိတဲ့အတိုင်းမင်းကသူ့ကိုကလပ်အသင်းမှာသူ့မျက်နှာကိုသူဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ မင်းသိတယ်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာဖို့လိုတယ်
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း ထိပ်တန်းဘော်ဒါကျောင်း ၅ ခုသို့သွားပြီး၊ ဥပမာဘော်ဒါကျောင်းနှင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင်သင်နှင့်သူကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်မည်။ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂျိမ်းစ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Harrow မှဖြစ်သည် Corduroy ဘောင်းဘီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီနှင့် Jumper နံပါတ်ကို ၀ တ်ပြီးဝတ်ဆင်ရလွယ်သောဆံပင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် Nah အစားပိုကောင်းတယ်ငါ့အပြားသို့လာကြ၏။
ရှားရှားပါးပါးနှင်းဖုံးကျားသစ်များကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားဒေသခံတိရစ္ဆာန်ရုံသို့စိတ်ကူးယဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုသင်ကတိပေးလိမ့်မည်။ အဲဒီအစားသူတို့ကကထိကများအကြားဒေသခံ Giraffe စားသောက်ဆိုင်မှာသငျ့လျြောသောဘာဂါဘို့သင့်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့လက်များသည်ဘားများကိုတစ်နေကုန်ရှာဖွေနေသည်။
သူတို့ကမင်းကိုဘယ်လောက် fuck ည့်ခံကြမလဲ။ သူ၏အလုပ်ကိုပိုမိုဂရုစိုက်သည့်တိကျသောတိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး အတွက်သင့်အားသူသင့်ကိုထားပေးမည်။
၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း သူတို့ကတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အထူးသဖြင့် doggos များအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးသိပ္ပံပညာကနေငြင်းပယ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်သင်သူတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဘယ်အရာကိုသင်မေ့လျော့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မနက်2နာရီမှာမင်းစာပို့မယ် OMG ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။